Terlalu Tampan ( 2019 ) | MM Movie Store
Terlalu Tampan ( 2019 )
ဒီဇာတျကားလေးကတော့ IMDb မှာလညျး 7.1 အထိရထားပွီiflix မှာလညျး 8.6/10ထိရထားတဲ့ အငျဒိုနီးရှားဆယျကြျောသကျပေါ့ပေါ့ပါးပါးအခဈြဟာသကားလေးပဲဖွဈပါတယျ။
ရုပျရှညျခြောပွီးခနျ့ညားလှပွီဆိုပွီးအရာရာအဆငျပွပွေီလို့ထငျကွတဲ့သူတှရှေိကွပမေယျ့ ဒီမှာတော့မြိုးရိုးလိုကျရုပျခြောတဲ့အခြောကွီးမိသားစုကပေါကျဖှားလာလို့စျောကွညျဘဲဖွဈနတေဲ့ကောငျလေးတဈယောကျ…..တှသေ့မြှမိနျးမတိုငျးကသဲသဲလှုပျကွလှနျးလို့အပွငျတောငျမထှကျရဲအောငျဖွဈရပွီး ခြောလှနျးလို့ဒုက်ခရောကျနရေတဲ့ကူလငျးတဈယောကျ….
.မိဘတှနေဲ့အဈကိုဖွဈသူတို့ပေါငျးပွီးဂငျြးထညျ့လိုကျလို့ မဖွဈမနအေပွငျကြောငျးစတကျရတဲ့အခါ..လောကကွီးထဲတကယျစပွီးတိုးဝငျမိတဲ့အခါမှာတော့ သူ့ကွောကျနတေဲ့အရာတှေ….သူလကျခံထားတဲ့စံသတျမှတျခကျြတှေ…အားလုံးပွောငျးလဲသှားပါတယျ။
တကယျအဲလိုဖွဈသှားစရေအောငျ ကြောငျးစတကျကတညျးဘယျလိုတှဖွေဈခဲ့လဲ…ဘာတှကေအဓိကဖွဈစခေဲ့လဲဆို တာတော့.လူငယျအခဈြဟာသကားလေးဖွဈတဲ့အတှကျ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ကွညျ့ကောငျးစမှောပါ။
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ IMDb မှာလည်း 7.1 အထိရထားပြီiflix မှာလည်း 8.6/10ထိရထားတဲ့ အင်ဒိုနီးရှားဆယ်ကျော်သက်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအချစ်ဟာသကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်ရှည်ချောပြီးခန့်ညားလှပြီဆိုပြီးအရာရာအဆင်ပြေပြီလို့ထင်ကြတဲ့သူတွေရှိကြပေမယ့် ဒီမှာတော့မျိုးရိုးလိုက်ရုပ်ချောတဲ့အချောကြီးမိသားစုကပေါက်ဖွားလာလို့စော်ကြည်ဘဲဖြစ်နေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်…..တွေ့သမျှမိန်းမတိုင်းကသဲသဲလှုပ်ကြလွန်းလို့အပြင်တောင်မထွက်ရဲအောင်ဖြစ်ရပြီး ချောလွန်းလို့ဒုက္ခရောက်နေရတဲ့ကူလင်းတစ်ယောက်….
.မိဘတွေနဲ့အစ်ကိုဖြစ်သူတို့ပေါင်းပြီးဂျင်းထည့်လိုက်လို့ မဖြစ်မနေအပြင်ကျောင်းစတက်ရတဲ့အခါ..လောကကြီးထဲတကယ်စပြီးတိုးဝင်မိတဲ့အခါမှာတော့ သူ့ကြောက်နေတဲ့အရာတွေ….သူလက်ခံထားတဲ့စံသတ်မှတ်ချက်တွေ…အားလုံးပြောင်းလဲသွားပါတယ်။
တကယ်အဲလိုဖြစ်သွားစေရအောင် ကျောင်းစတက်ကတည်းဘယ်လိုတွေဖြစ်ခဲ့လဲ…ဘာတွေကအဓိကဖြစ်စေခဲ့လဲဆို တာတော့.လူငယ်အချစ်ဟာသကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ကြည့်ကောင်းစေမှာပါ။